European bhajeti yemhepo inotakura inokwira ndege dzekuRussia dzeSt.Petersburg
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » European bhajeti yemhepo inotakura inokwira ndege dzekuRussia dzeSt.Petersburg
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hungary Kuputsa Nhau • Ireland Kuputsa Nhau • nhau • Russia Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
British EasyJet, ChiIrish Ryanair, uye chiHungary Wizz Air vakanyorera kushanda kubva kuPulkovo Airport mu Petersburg, Russia. Kuvapo kwevatakuri vatatu vatsva kunogona kukurudzira zvakanyanya vashanyi kupinda muguta.
Mari inotakura bhajeti yeEU inogona kukwezva vanogadzira mamirioni matanhatu pagore pagore na6, rakaburitsa nzvimbo yekutengesa RBC, ichidudza Leonid Sergeev, CEO weanoshanda nendege Northern Capital Gateway LLC. Pulkovo anonzi anotarisira kuwedzera kukuru kwevatakurwi kubva kuGerman, France, UK, Italy neSpain.
Vatakuri bhajeti vatatu havana kutaura nezvenyaya idzi.
Kunze kwemahofisi eEuropean, kambani yeCIS-yakanyorera kuti ishandise ndege pakati pePulkovo neUS, Sergeev akadaro. Zvisinei, mukuru uyu haana kuburitsa kuti ndeipi ndege.
Nhandare inotarisira kuona kudiwa kwakanyanya kubva kumakambani sezvo ndege nhatu idzi ndidzo dzakatanga kunyorera nzvimbo yemhepo isati yazivisa zviri pamutemo kuti yakapihwa inonzi 'Seventh Freedom of the Air.' Hurumende ichaedzwa kwemakore mashanu uye panguva ino vatakuri vachabvumidzwa kubhururuka vachipinda nekubuda vasina kumhara munyika yavakanyoreswa. Semuenzaniso, kambani yeIrish inogona kubhururuka kubva kuSt. munyika yechitatu.
Northern Capital Gateway yakatokumbira vatungamiriri vekutakura veRussia kuti vabvumidze nzira dzinoenda kunyika makumi matatu nenhatu, uye hurukuro dziri kuenderera mberi. Ndege dzisiri dzeRussia dzinoronga kushanda gore rese, iine 33 muzana yendege muzhizha uye makumi mana muzana muchando.
Nekudaro, vamwe vanoshanda nendege veRussia vakataura kunetsekana kwavo pakupa ndege dzisiri dzeRussia nomwe-kodzero dzemumigwagwa, vachitya kuti vangangodzishandisa mumwaka wakakwirira chete. Zvinoreva kuti vatakuri vekumba vanofanirwa kuzadza gap mumwaka wakaderera, munguva yechando, zvichizoguma nekurasikirwa nemari kwavari. Vatsoropodzi vanosimbirira kuti ndege dzendege dzeRussia dzinofanirwa kuve nekodzero dzakafanana munyika dzine vashandi vanonakidzwa nerusununguko rwemhepo kubva kuPulkovo.